Markay jiraan maalmo kooban oo dhammaadka sannadka, iyo inta Xanta ku hareeraysan JAILBILAAL suurtagal ah ee iOS 9.2 soar. Dhinac waxaan leenahay tweak in DeleteCut wuxuu noo ogolaanayaa inaan si dhakhso leh u tirtirno ereyada oo dhan, mid kale oo noo ogolaanaya Sida loogu daro macruufka saamiga macruufka barnaamijka YouTube, marka lagu daro mid kale oo noo ogolaanaya Sida loo xiro dhammaan tabiyada Safari hal mar iyo mid loogu talagalay si aan u awoodno Sida loo isticmaalo 3D Touch si loogu daro heesaha liiska Apple Music adeegsiga 3D Touch.
Dhinaca kale, Tifaftirayaasha Actualidad iPhone, waxaan soo bandhigeynaa codsiyada aan ugu isticmaalno maalinba maalinta ka dambeysa, sida Michael Hernandez, nacaybkeena xirfadeysan ee WhatsApp, Paul Aparicio, Carlos Sanchez y anigaa iska leh. Laakiin maalmaha soo socda, inta kale ee daabacayaasha ah waxay sii wadi doonaan inay daabacaan barnaamijyadooda ugu faa iidada badan sanadkaan oo dhan. Marka laga hadlayo fikradaha iPhone 7, toddobaadkan waxaan ku tusnay fikrad cusub oo na tusaysa mala-awaal iPhone 7 iyada oo aan loox lahayn dhinacyada, waa wax inbadan oo isticmaaleyaashu jeclaan lahaayeen inay arkaan laakiin taasi runti waxay noqon doontaa mid cakiran. Waxaan sidoo kale ku soo bandhignay fikrad ah iPhone 7 oo aan lahayn xiriir jaak ama xiriir Hillaac, laakiin waxay la imaan laheyd kaliya USB C-ga.
Haddii aan ka hadalno Apple Music, kama tagi karno imaatinka kooxdii Ingiriiska ee The Beatles kaliya maahan Apple Musiclaakiin sidoo kale inta hartay ee adeegyada fidinta muusikada sida Spotify, Deezer, TidalNot Laakiin maahan Pandora iyo Rdio. Marka la eego codsiyada, markii iTunes Connect uu fasax ku jiro, wax yar ayaa ah codsiyada gaadhay App Store maalmahan. Sikastaba waanu kahadalnay Littlstar oo na tusaysa cajalado 360-degree ah oo ka socda Apple TV,
Jailbreak macruufka 9.1 hadda waa la heli karaa
Waxa socda hadda waxay yiraahdeen dhamaadka sanadka 2016 ama illaa dhamaadka iOS 9.2.1 uu soo baxayo
iTunes waxay u dabaaldegtaa Maalinta Feerka iyagoo heysta albumyo qiimo jaban ku leh UK iyo Canada